Sarah Lovan waxay ku soo biirtay McKnight sanadkii 2005 waxayna ahayd sarkaal barnaamij ilaa sanadkii 2012 barnaamijka Farshaxanka ee Foundation, kaas oo taageera farshaxanada shaqeeya si ay u abuuraan waxna ugu taraan bulshooyinka firfircoon ee ku nool Minnesota. Lovan wuxuu kaqeyb qaataa dadaallada dhisida garoonka, oo ay kujiraan kuwa kajira miyiga iyo magaalooyinka Minnesota iyo waliba qaran ahaan. Waxay u heellan tahay dhaqannada deeq-lacageedka loo siman yahay waxayna si qoto dheer u xiiseyneysaa yareynta caqabadaha maalgelinta.
Lovan wuxuu aamminsan yahay awoodda fanaaniinta iyo dhaqan-yaqaannada inay beddelaan sida aan u fahmayno ulana macaamilno adduunka. Waxay xubin firfircoon ka tahay Wadashaqeeyeyaasha Sinnaanta Jinsiyadda ee Wada-shaqeynta ee Minnesota waxayna u adeegtaa sidii u-doodaha maxalli iyo qaran ee kordhinta sinnaanta iyo caddaaladda samafalka. Tan iyo markii 2019 Lovan uu u adeegay guddiga kafaala-qaadka iyo maalgalinta maaliyadeed ee 'Propel Nonprofits'. Intaa waxaa sii dheer, waxay la tashatay Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy ee Jaamacadda Grand Valley State. Xarunta wax ku oolka ah ee Philanthropy waxay ku soo bandhigtay Lovan warbixinteeda aragtida deeq bixiyaha iyada oo ah sarkaal barnaamij si heer sare ah loo qiimeeyay oo ku saabsan aagga isgaarsiinta wax ku oolka ah iyo ixtiraamka deeq bixiyaasha.
McKnight ka hor, Lovan wuxuu ka shaqeeyay horumarinta Kulliyadda Farshaxanka iyo Naqshadeynta ee Minneapolis. Waxay ka heshay BA barashada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta isbarbardhiga ah iyadoo culeyska la saarayo muusikada jaamacada Minnesota waxayna ka qalin jabisay barnaamijka Mini MBA ee jaamacada St. Thomas.